Wezingane upholishi usayizi wokubala
Izingane izicathulo osayizi wokubala inthanethi
Wezingane upholishi usayizi wokubala kuyosiza ukuchaza zezingane waphi emasayizi, ngeke ukuguqula abantwana USA sika waphi emasayizi Russian, futhi kuyokwenza abala by yobudala kanye ngamasentimitha ukuze ubukhulu emazweni ahlukene.
Izingane izicathulo osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba ukuguqula izingane waphi emasayizi European, British, American (USA), ezinobukhulu Japanese noma ngamasentimitha. Ngokwesibonelo, ukuguqula isicathulo kusukela US European, kusukela European noma US isicathulo-Japanese, UK njll Futhi ungakwazi ukubona izingane upholishi usayizi ishadi, ne osayizi ezinkulu nezincane.
Russian European English (UK) American (USA) Japanese Isentimitha
Shoes osayizi wokubala inthanethi
Ukuguqula zabesilisa, abesifazane, futhi izingane waphi emasayizi kwamanye amazwe, njenge-European, British, American (USA), ezinobukhulu Japanese noma ngamasentimitha.
Izingane izingubo osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela tinhlobo letehlukene izingane izingubo osayizi emazweni ahlukene.
Izingane amasokisi osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela izingane amasokisi ezinobukhulu kwamanye amazwe, njenge-American, British, European, ezinobukhulu Russian, isicathulo noma ubude unyawo ngamasentimitha.
Iqukethe izingane ezincane nezinkulu izicathulo osayizi ishadi emazweni ahlukene.